Articles • Health News Nepal
✍️ विज्ञान भट्ट लागुऔषध दुरुपयोग नेपाल र अन्यत्र लामो समयदेखि गम्भीर सामाजिक समस्याहरू मध्ये एक हो। लागुपदार्थको दुरुपयोगले मानव जीवनमा...
शालीनता उहाँको बोलीमा भन्दा पनि व्यवहारमा बढी झल्किन्छ। सर्ट-पाइन्ट, कोट र सिरमा ढाकाटोपी लगाएका उनि बिरामीलाई एम.आर.आई गर्न आउँदा ध्यान...
✍️ डा. अरुण ज्ञवाली के हो ग्यास्ट्रोएन्टेराइटिस ? परजीवी, विषादी तथा अन्य विभिन्न कारणले गर्दा पेट तथा आन्द्राको भित्री सतह...
✍️ डा. विश्वाश शर्मा फोक्सोको क्यान्सर फोक्सोबाट उत्पन्न हुन्छ। धुम्रपानलाई फोक्सोको क्यान्सरको सम्भावित कारण मानिन्छ । सुर्तिमा पाइने निकोटिन र...
✍️ डा. मुकुन्द झा यदि दाँत बाङ्गो टिंगो छ भने सबैभन्दा पहिले दाँतमा फोहोर जम्ने हुन्छ। दाँत माझ्नलाई समेत अप्ठेरो...
✍️ डा. राकेश शाह Colorectal Surgeon MBBS, MS-Colorectal Surgery, MPH (बंगलादेश) कोलोरेक्टर क्यान्सर (Colorectal Cancer) भन्नाले ठूलो आन्द्रा र मलाशयको...
डा. भोजराज अधिकारी चिकित्सक पेशा सुरक्षित हुनुको लागि विभिन्न कारणहरु मध्ये राज्यले चिकित्सा पेसालाई विभिन्न ऐन नियमहरु कार्यन्वयनमा ल्याउन नसक्नु...
थाइराइड ग्रन्थि घाँटीको अग्रभागमा रुद्रघण्टीको तल हुन्छ । उक्त ग्रन्थिले थाइराइड हार्मोन उत्पन्न गर्ने काम गर्छ । जसले गर्दा हामीले...